Dzinopenya Seychelles Mifananidzo yekukwezva Vashanyi vanobva kuRomania
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Dzinopenya Seychelles Mifananidzo yekukwezva Vashanyi vanobva kuRomania
nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Akasiyana Nhau
Vafambi vanobva kuRomania vanozowana kudziya kweSeychelles uye runako rusingaenzanisike kubva kure apo mifananidzo inopenya yenzvimbo inokwezva materevhizheni avo muna Gumiguru.
Seychelles kuve inoratidzwa mune yakakurumbira show paRomanian PROTV La Măruță.
Kuzivikanwa kwechiratidziro kunotarisirwa kuwedzera kusimudzira kuoneka uye chimiro cheSeychelles.
Vataridzi vachange vaine nzwisiso yechikafu chinonaka cheCreole kuburikidza nekushambadzira kwekubika kwekubika pakati pemubiki wemuno Marcus Freminot nemuratidziri wepurogiramu.
Vashandi vanobva kuRomania PROTV vaive muSeychelles nguva pfupi yadarika, vachitora mifananidzo yezvekuenda - kubva kumahombekombe uye zviitiko zvekunze kune zvetsika uye zvevaraidzo - izvo zvicharatidzirwa pachirongwa chakakurumbira chinonzi La Măruță.
Iyo showa, inotepfenyurwa nePROTV, inoratidzwa naCătălin Maruță uyo anobva kumhuri inozivikanwa uye inodikanwa yemitambo yeTV kubva kuRomania. Kuzivikanwa kwechiratidziro kunotarisirwa kukwidziridza zvakanyanya kuoneka uye chimiro cheSeychelles pamusika iwoyo sezvo mwaka wechando unopinda uye munhu wese anorota kwekutiza kwakakwana kumwe kunodziya uye sekukoka sezvitsuwa zvidiki zveIndian Ocean.
Vataridzi vachange vaine nzwisiso yechikafu chinonaka cheCreole kuburikidza nekushambadzira kwekubika kwekubika pakati pemubiki wemuno Marcus Freminot nemuratidziri weratidziro, Andreea Dociu, mavanogadzirira ndiro dzechinyakare kubva kunyika dzavo.
Chef Freminot inopa hove-inodiridza hove-yakakangwa hove neCreole muto, pamwe nehuku curry uye mango chutney ichiperekedzana nepo muparidzi Dociu achiuya neinonaka uye yakapfuma main kosi dhishi yakagadzirwa nepolenta (cornflower), parmesan chizi, bhekoni nezai.
Dzakanyanya kusarudzwa, madhishi anozofadza vafambi, achivakwezva kuti vaende kuSychelles kunovaravira ivo voga hunoshamisa uye hwakasimba nzvimbo yekuenda.
Vashandi vakatorawo rwendo rweMahé, vachitora mafirimu akasarudzika ezviitiko zvemuno zvinowanzoshayikwa nevashanyi. Vakashanyira Trois Frères Distillery kuLa Plaine Ste André kuti vadzidze nhoroondo inonakidza kuseri kweiyo inogadzirwa imomo Takamaka Rum uye vazvipinze neruzivo rwekunakisa rum.
Aihwa zororo kuSychelles yakakwana pasina 'chitsuwa chakakwakuka' uye PROTV ichaunzira avo vanoona zviitiko zvekuenda kuPraslin nendege nerwendo rwegungwa kuenda kuchitsuwa cheLa Digue chiri padyo.